अनमोलले यसकारण खेले ‘जेरी’, होला त ‘होस्टेल’ जस्तै सुपरहिट फेरी’ ? « Mazzako Online
अनमोलले यसकारण खेले ‘जेरी’, होला त ‘होस्टेल’ जस्तै सुपरहिट फेरी’ ?
‘अनमोललाई धेरै चलचित्रमा अफर आएको हो तर उसले स्क्रिप्ट चित्त नबुझेकाले रिजेक्ट गरेको थियो’, सदाबहार अभिनेताका उपमा पाएका भुवन केसी भन्दै थिए– ‘तर उसले ‘जेरी’ मनपरायो र खेल्यो ।’ आज विहान राजधानीको कुमार हलमा चलचित्र ‘जेरी’ द्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा नायक केसीले अनमोलको यो रहस्य खोलेका हुन् । उनले नेपाली फिल्मको व्यापार नभइरहेको यो अवस्थामा ‘जेरी’ ले नयाँ आयम थप्ने विश्वास व्यत्त गरे ।
‘होस्टेल’ रिलिज भएको झन्डै एक वर्षपछि ‘जेरी’ मार्फत दर्शकमाझ आउन लागेका भुवन पुत्र केसीले मिडियाकर्मी र दर्शकको माया बिना आफु अपुरो रहने बताए ।
‘जेरी’ मार्फत अभिनयमा डेब्यु भएकी नवनायिका आना शर्माले भने फिल्ममा अभिनय गर्न पाएकोमा आफुलाई गर्व महसुश भएको बताइन् । आना कोरियोग्राफर रचना शर्मा गुरुङकी छोरी हुन् । रचनाकै अर्की छोरी अमाल्य शर्माको समेत ‘जेरी’ मा अभिनय छ ।
सुपरहिट चलचित्र ‘होस्टेल’ बनाएर चर्चा कमाएका निर्देशक हेमराज विसीद्वारा निर्देशकिय चलचित्र हो ‘जेरी’ । अहिलेका युवा पुस्ताको मनोविज्ञानलाई लिएर बनाइएको रोमान्टिक लभ स्टोरीको कथा हो ‘जेरी’ , निर्देशक विसीले कार्यक्रममा सुनाए ।
सामाजिक संजालमा हिट भइरहेको ‘जेरी’ को ट्रेलर र दुईवटा गीत कार्यक्रममा देखाइएको थियो । त्यसपछि सबै पत्रकारहरुलाई गुलियो ‘जेरी’ खुवाएर विदा गरिएको थियो । यस अर्थमा पनि कार्यक्रम ‘जेरीमय’ बनेको थियो ।
हेमराजले ‘जेरी’ को कथा सह निर्माता सम्राट गौचनसँग मिलेर तयार गरेका हुन् । मनोज शेरचनको लगानी रहेको फिल्म ‘जेरी’ लाई शैलेन्द्र डि.कार्कीले खिचेका छन् । पपर्कन पिक्चर्सको वितरण रहने फिल्म ‘जेरी’ आउँदो कार्तिक २८ गतेबाट देशभर प्रदशर्नमा आउँदैछ । युवा पुस्ता माझ यो फिल्म अहिले प्रतिक्षित बनेको छ ।